Inguqu ezinzileyo yesiqalisi sePOCO ngoku iyafumaneka | I-Androidsis
Inguqu ezinzileyo yesiqalisi sePoco ngoku iyafumaneka kuGoogle Play
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Xiaomi
Xa iPocophone F1 yaziswa, ifowuni ibambe ingqalelo yabasebenzisi abaninzi ngenxa yobukho bePoklo Launcher yayo. Ivelise inzala phakathi kwabasebenzisi abaninzi, ekhokelele uXiaomi ukuba enze isigqibo sokuyazisa ngokusesikweni kwimarike. Kwaye kwezi veki zidlulileyo sinenguqulo ye-beta yesiqalisi esifumanekayo. Ngelixa ulinde umzuzu xa ingxelo ezinzileyo iya kukhutshwa ngokusemthethweni.
Ekugqibeleni imini ifikile. Kungenxa yokuba abasebenzisi abanomdla kwesi siqalisi sePOCO banethamsanqa. Ngoku iyafumaneka kuhlobo lwayo oluzinzileyo kwiVenkile yokudlala. Ngoku inokukhutshelwa ngaphandle kwengxaki.
Kwaye ulindelo lwaluphezulu, kuba ibifumaneka kuphela iiyure ezimbalwa kwivenkile yesicelo, kwaye ukhuphelo lwabo sele ludlule kwi-500.000. Kuyacaca ke ngoko ukuba bekukho umdla kwisindululi sokugqibela sophawu lwesiTshayina. Inguqulelo yayo ye-APK isebenza kakuhle, ngaphezulu kokukhutshelwa okungaphezulu kwe-170.000.
Yintoni eyenze ukuba esi siqalisi sePOCO sithandwa kangaka? Su elula, encinci kunye nococeko olucocekileyo, ikuvumela ukuba ulawule usetyenziso ngalo lonke ixesha kwaye uyithintele ukuba ingajongi njengokuxinana. Yintoni eya kusivumela ukuba sihambe kwaye sifikelele kwizicelo kakuhle ngakumbi xa sisebenzisa isixhobo.
Ukongeza, inika imisebenzi eyongezelelweyo eyenza ukuba ibe lukhetho olunomdla kakhulu. Umzekelo, sine-icon kwi-POCO Launcher, kwidesktop, leyo ivumela ukuba sicime i-cache yesicelo. Ngendlela encedisa kakhulu le nkqubo. Kufuneka ucofe nje kwiqhosha.
Sikushiya apha ngezantsi ngekhonkco lokukhuphela kwesiPhehleleli sePOCO, esele ifumaneka kwiVenkile kaGoogle yokudlala ngokusemthethweni. Ithembisa ukubetha kunye nabasebenzisi. Ke siyakukuqwalasela kwindaleko yayo kwezi veki.
Umthuthukisi: Xiaomi Inc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Inguqu ezinzileyo yesiqalisi sePoco ngoku iyafumaneka kuGoogle Play
Utshintsha njani iphepha lasekhaya leGoogle Chrome kwi-Android
Ungaluthumela njani ngaphandle uluhlu lwakho lokudlalwayo lweSpotify